Waxyaabaha qaarkood waqti ayey qaataan. Dulqaad yeelo oo wanaag samee, waxyaabaha ayaa fiicnaan doona. - qarsoodi - Quotes Pedia
Waxay leedahay wabigu dhagax ayuu ku gooyaa xooggiisa darteed, laakiin sababta oo ah adkeysi. Taas macnaheedu waa in aan dulqaad yeelano oo dadaalno isdaba joog ah isla markaana, isla mar ahaantaana, isku hagaajinno nafsadeena tallaabo tallaabo leh waqti si aan u gaarno himiladeena.
Midbaa laga yaabaa inuu u maleeyo "Waan ka yaraanayaa gadaal markii aan la tartamayo ninka kale", laakiin dhab ahaantii, arintu sidaa ma ahan haba yaraatee. Waxaa naga dhisnaa camalkeena wanaagsan iyo kuwa xunba. Qof kastaa wuxuu leeyahay saacad kaladuwan, qof walba aragtidiisa waqtiga ee Timing gebi ahaanba wey ka duwan tahay kan kale, waxayna ku egtahay inay ka dhacdo adduunyo dadyow aad u tiro badan, dhaqammo, iyo luqad.
Waxaa jira kala duwanaansho ku saabsan sheekada nololeed ee qof walba, mid walbana waa xirfad guud, mar hadii aan bixinno dadaal aan ku galeyno run ahaantii. Waxay leedahay waxa gadaal ka yimaadaa si fiican ayey u sii ahaanayaan. Tani aasaas ahaan waa xaqiiqda ah in mar haddii wax ku dhacaan meel sax ah, waxaan ka dhigi karnaa inay noqdaan kuwo sii iftiimaya oo dhalaalaya.
Markaa, waa wax muhiim ah inaan nafteenna waqti siino, waqtiga oo keliya ayaa ah sheyga kelida ah ee meerahan kaasoo bogsiinaya xaalad kasta oo xun. Waxay leedahay awooda buuxda ee bogsashada. Waa uun sixir markii waxku dhacaan meesha saxda ah, xaalada saxda ah, waxaanan ugu dambeyntii dhihi karnaa maalintaas haa, waan sameynay.
Waa inaan maskaxda ku haynaa in guuldaradu aysan ahayn mid joogto ah, guulna ayan sidoo kale ahayn joogto. Mid ka mid ah wuxuu si isdaba joog ah isku dayaa inuu naftiisa qaabeeyo naftiisa maalin kasta si uu u fiicnaado, xoog yara xiirto, xoog u yeesho. Waqtiga oo lagu fiicnaado iyo aaminaadda qofku naftiisa ku qabo ayaa fure u ah weynaanta.
Adduunyo isbeddello nasiib ah, isbeddelka keliya ee jira ayaa ah waxa joogtada ah ee lama huraanka ah. Ilaah ha isku halleeyo oo naftaada aamin; Waxyaalaha qaarkood waxay qaataan waqti uun sidii aan isugu geyn lahayn nafteenna qof khibrad leh oo xagga istiraatiijiyadeed ah.
Waqti xaddidan shaqsi. Waxay kuugu tijaabineysaa meel fagaare ah, waxay kugu ceebeyneysaa meel fagaare ah, laakiin waxay kugu abaalmarin doontaa si gaar ah. Waqtiga qofka lunsaday uu cadeyn karo naftiisa ama naftiisa inuu yahay qof maskax weyn ku leh meeshiisa isla markaana uu ku faano wax qabadkiisa ama shaqadiisa.
Xigasho loogu talagalay Samir
Joogso Hadallada Bukaanka
Joogtid Sawirada Wanaagsan ee Joogtada ah
Joogitaan Qumman oo Wanaagsan
Noloshu waa macno badan tahay taasina waa run. Annagu garan mayno qiimaha waxyaabaha qaarkood ilaa iyo mooyee…
Noqo mid mahadsan, oo maskaxda ku hay maskax wanaagsan. - Qarsoodi
Noqo mid mahadsan, oo maskaxda ku hay maskax wanaagsan. - xigashooyinka aan la aqoonsanayn:
Mararka qaarkood xiiristu waxay ka qiimo badan tahay kun eray. - Qarsoodi
Mararka qaarkood xiiristu waxay ka qiimo badan tahay kun eray. - xigashooyinka aan la aqoonsanayn:
Ku billow maalin kasta mahadnaq taasna aakhirka waxay kor u qaadeysaa ruuxaaga si aad awoodid